स्वास्थ्य रहन हप्तामा कति पटक शारिरिक सम्पर्क गर्न पर्छ ? महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्ने ? (अन्तरवार्ता) – Complete Nepali News Portal
स्वास्थ्य रहन हप्तामा कति पटक शारिरिक सम्पर्क गर्न पर्छ ? महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्ने ? (अन्तरवार्ता)
Tika Prasad Amgain May 19, 2018
पोखराका बरिष्ठ छाला तथा यौन रोग बिशेषज्ञ हुन्–डा. गृश्ममोहन भट्टराई । बिगत लामो समयदेखी छाला र यौनजन्य रोगहरुको उपचारमा तल्लिन डाक्टर भट्टराईले मानिसको जिवनमा शारिरिक सम्पर्क अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । एक टेलिभिजन कार्यक्रमलाई दिएको अन्र्तवार्तामा डा. भटट्टराईले सुरक्षित सम्पर्क गर्नुपर्ने र स्वास्थ रहन कम्तिमा पनि हप्ताको दुईपटक शारिरिक सम्पर्क राख्न सुझाब समेत दिएका छन् । उनले आफ्नो यौन साथी नभए हस्तमैथुन गर्न पनि सुझाब दिएका छन् । उनले महिला वा पुरुष दुबैले हस्तमैथुन गर्न सक्ने र त्यसले कुनै पनि असर नगर्ने समेत बताएका छन् । हेरौं उनै छाला तथा यौन रोग बिशेषज्ञ डा.गृश्ममोहन भट्टराईसंग ऋषि खतिवडाले गर्नुभएको कुराकानी ।